Udo. Kedu ihe kpatara ị na-ananye ụmụ nwanyị mkpuchi isi \_ - Rabbi Michael Avraham
Udo. Kedu ihe kpatara ịcha akwa isi maka ụmụ nwanyị \_
Nzaghachi > Atiri: Halacha > Udo. Kedu ihe kpatara ịcha akwa isi maka ụmụ nwanyị \_
0 Nye olu Wepu ụda
Israel Ajụrụ ya afọ 4 gara aga
Udo. N'akụkụ nke mkparịta ụka na mkpuchi dị mma nke ntutu isi nwanyị ahụ, lee ọchịchọ 1, ahụrụ m na Amos Bracha bipụtara na n'akwụkwọ ozi gị degaara ya, ị dere "na ikike n'onwe ya nwere ebe" (ma ọ bụghị ma ọlị). site na ebumnuche Rabbi Mashash). Na Japanese maka akụkọ gị n'elu.
Mgbe nyochachara, ikekwe ị nwere ike ịghọta m ebe n'ime akụkọ gị ebe ahụ, ma ọ bụ ma ọlị, ị dere ihe kpatara ya?
Maka akwụkwọ ozi gị, hụ google.com/view/minagshelkishot Nyochaa
Ekele dịrị akwụkwọ gị.
Mkpado ajụjụ: Isi okwu
mikyab Ndị ọrụ Zara afọ 4 gara aga
Edeghị m arụmụka ahụ n'ihi na nke ahụ abụghị isiokwu a na-akparịta ụka. Akụkọ ahụ gbasara arụmụka Rabbi Mashash.
Biko banye ma ọ bụ Register iji nyefee azịza gị
Aha njirimara ma ọ bụ adreesị ozi-e
→ Ajụjụ gara aga
Ajụjụ na-esote ←
Soro ndị ndebanye aha 3,095 ọzọ
Ntugharị na ọzara
Ma eleghị anya, ọ bụ oge ịtụgharị uche n'omume?
RAAM na "Takia"
ịdị ọcha ezinụlọ
Ma ọ bụ Gbanye Nbili na ọdịda nke Bennett na ihe ha pụtara (Osisi 486)
Na ụlọ nke atọ Gbanye Nbili na ọdịda nke Bennett na ihe ha pụtara (Osisi 486)
Mweghachi 'ikike' ga-enye ohere maka ụlọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị abụọ maka ndò abụọ nke ọha okpukperechi nke mba Gbanye Nbili na ọdịda nke Bennett na ihe ha pụtara (Osisi 486)
Elhanan Gbanye Azịza maka ụdị niile.
7 Dị ọcha mgbe ọ dịghị mkpa Gbanye Azịza maka ịdị ọcha nke ezinụlọ